वैदेशिक रोजगारी एकः समस्या अनेक - Kavre Times Weekly | Kavre Times Weekly
वैदेशिक रोजगारी एकः समस्या अनेक
प्रकाशित मिती : शनिबार, भदौ २४, २०७४ by admin · Comments
प्रकाशित मिति: २०७४-०५-२०
मुलुकको बेरोजगारी समस्याका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या दिन दुई गुणा र रात चौगुणाको दरले वृद्धि हुँदै आएको छ । दैनिक औसत १६ सय युवा रोजगारीको लागि विदेशिने गरेका छन् । यति धेरै मात्रामा देशको जनशक्ति बाहिरिँदा मुलुकले भोग्नुपर्ने क्षति त छँदैछ, परिवारमा आउने विचलन त्योभन्दा बढी भयावह छ । त्यहि भयावहले मानसिक सन्तुलन गुम्ने र आत्महत्या र अनेक बिकृति बढेको तथ्यांकहरु बाहिर आएका छन् ! वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका नेपाली कामदारले बेहोर्नुपरेका सास्ती, बिचल्ली र पीडाका खबर त अहिले सामान्यजस्तो लाग्न थालिसकेको छ । रोजगारीका क्रममा मृत्यु र आत्महत्याको संख्या बढ्दै जाँदा वैदेशिक रोजगारी प्रमुख चुनौतीको विषय बन्न पुगेको छ । विदेश पलायनले निम्त्याएका एकपछि अर्को पीडादायी खबर हामी नेपालीले सुन्नु परेको छ । बढ्दो वैदेशिक रोजगारीको समस्याका कारण हत्या, आत्महत्या, पारिवारिक बेमेल, पारिवारिक विखण्डन, सम्बन्ध विच्छेद र थुप्रै सामाजिक विकृतिहरु तीव्ररुपमा बढ्दै गइरहेका छन् । यस्ता समस्याबारे व्यापक अध्ययन र अनुसन्धान गरी समाधान गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । स्वदेशमा सम्भावनाको खोजी नै नगरी दक्ष शैक्षिक जनशक्तिले पनि विदेशकै सपना बोक्दा दीर्घकालीन समस्या निम्तिने खतरा बढेको हो ।
अहिलेको आर्थिक प्रतिस्पर्धाको युगमा जीवन निर्वाहको लागि सामान्यभन्दा सामान्य पेसा, व्यवसाय र उद्यमका लागि पनि स्वदेशी सिमाना नै पार गर्नुपर्ने तितो अवस्थाप्रति युवा जनशक्ति निर्यात देशका नीति, निर्माता र नेतृत्वकर्ताले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । तर, विडम्बना ! नेपालमा बढ्दो जनशक्ति पलायनको जोखिमबारे सरोकारवाला निकाय नै मौन रहेका छन् । बढ्दो गरिबी, बेरोजगारी र देशको अस्थिर राजनीतिका कारण युवा पुस्ता रोजगार गन्तव्यका लागि बिदेसिन बाध्य भइरहेका छन् ।राज्यले दक्ष जनशक्ति परिचालन गरेर मुलुकको समृद्धिमा प्रयोग गर्न नसक्नु दुर्भाग्य हो । सरकार र राजनीतिक दलहरुको खिचातानीले गर्दा मुलुक दिनप्रतिदिन धराशयी बन्दै गएको छ । वैदेशिक रोजगारीका कारण नेपालीको जनजीवन अति प्रभावित भइरहे पनि स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने सोच बोकेका नागरिकको संख्या नगण्य छ । प्राकृतिक विपत्ति, महङ्गी र बढ्दो अराजकताका कारण आमनागरिक बाँच्नै नसक्ने अवस्था पुगिसकेका छन् । एकातिर १६ सयभन्दा बढीको संख्यामा नागरिक विदेश पलायन भइरहेका छन् भने अर्कोतिर जोखिमपूर्ण श्रम गर्नुपरेका नेपालीका हृदयविदारक खबर हामीले निरन्तर सुन्दै आएका छौँ । त्यसमा खाडी राष्ट्र र मलेसियाजस्ता मुलुकबाट हरेकदिनजसो बन्द बाकसमा नेपालीका शव आउनेक्रम जारी छ । वैदेसिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार हरेक वर्ष पाँच लाखभन्दा बढी नागरिक विदेश पलायन भएका छन् । अवैधानिक तबरबाट विदेसिनेको संख्यासमेत जोड्ने हो भने नेपालको जनसंख्याको एकचौथाई जनशक्ति नेपालबाहिरै रहेको देखिन्छ । बढ्दो वैदेशिक पलायनले नेपाली समाजमा निम्त्याएको समस्या विकराल छ । बढ्दो विदेश मोहले गर्दा कतिपय गाउँमा मलामीसमेत नरहेको र आपराधिक क्रियाकलापमा वृद्धि भइरहेको देखिएको छ ।
मुलुकमा पनि नेपालीको अवस्था कष्टकर नै छ । आ.व. ०७३÷७४ मा विदेशमा मृत्यु हुने कामदारको संख्यामा केही न्यूनीकरण भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा कामदार सुरक्षित हुन सकेका छैनन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत एक वर्षको अवधिमा मात्रै श्रम स्वीकृति लिएर बिदेशिएका ६८७ जना नेपालीको मृत्यु भएको थियो । ०७२÷७३ मा विदेशमा मृत्यु हुनेको संख्या ८१५ थियो भने अघिल्लो वर्ष एक हजार छ जनाले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका थिए । विगत एक वर्षमा विदेशमा चार महिलासहित ७८ जनाले आत्महत्या गरेको तथ्यांक छ । विदेश जाने युवालाई मनोवैज्ञानिक परामर्शका साथै सरकारले आत्महत्या रोकथामको उपायबारे ठोस योजना बनाउनु जरूरी देखिएको छ ।